Hevitra MPANOHARIANA | Novambra 2008
Isaorana ny Katolika
2008-11-02 @ 16:12 in Finoana
Alahady indray ny andro. Raha aty amin'ny tany mahantra andalam-pandrosoana mbola mahery ny fivavahana. Alahady voalohany amin'ny volana aogositra, fandraisana ho an'ny protestanta amin'ny ankapobeny. Ny an'ny Katolika eto amin'ny arsheveshe Antananarivo indray dia famaranana ny sinaody lehibe.
Vory maro dia maro tokoa ny mpivavaka avy amin'ny EKAR maneho ny firaisan-kinany sy ny fahazotoany. Tsy mba mifidy toerana tokoa ry zareo na dia mingaingaina tokoa aza ny hainandro.Ataoko fa tsy latsa-danja amin'izany ny fanentanana isam-piangonana tany. Ny protestanta manko amin'ny ankapobeny na entanina aza dia manao hoe iza koa no hitanin'andro any?
Fa ny tena mahavariana ary tsy mitsahatra aho ny mamerimberina dia hoe fa inona foana ity fanapahana ny lalan'Anosy andro alahady maraina ity ka manakorontana ny fiainana andavanandron'ny olona hatrany. Tsy misy afa-tsy eo ve ny toerana ahafahana manao izany. Nisy hazakazaka bisikileta maraina indray manko nanodidina an'Anosy. Tena voahelingenina ny rehetra satria tapahina ny lalana ami'nny fotoana tahaka ireny. Izany no isaorako ary ankasitrahako ny katolika fa tsy mihemotra amin'ireny izy ireo. Vao maika aza manaika ny hambom-pony raha izany ihany koa no azo ilazana azy.
Tsy nandeha mivantana tamin'ny haino aman-jerim-panjakana moa ity fotoan-dehiben'ny katolika ity... ary manahy mafy aho fa tsy nanatrika io ny filoham-pirenena. Saika tsy nolazaina tamin'ny rnm ny fisiany fa tamin'ny vaovao teny frantsay ihany no nilazana azy. Eo no manahirana satria hevitro manokana tahaka ny tsy miraharaha ny katolika mihitsy ny filoham-pirenena.
Fa ny iverenako hatrany ihany koa dia ny faneken'izay tompon'andraikitra ny hisian'ny fanelingelenana mandrakariva isaky ny alahady voalohan'ny volana. Tena omeko tsiny mihitsy izay tompon'andraikitra manaiky ilay izy satria toa fanivaivana ny zavatra fikirin'ny maro no ataony manapaka io lalana maro mifamezivezy rehefa alahady io (na ny ankehitriny na ny taloha). Raha vitsy an'isa ny kristiana dia tsy olana mihitsy fa raha betsaka kosa hananany olana ihany io ny farany. Izaho moa dia manameloka mandrakariva io fanelingelenana io hatramin'ny ela ary fantatrareo izay nanaraka ny bolongako hatry ny ela izany.
Hiram-panahy handravàna ny fanahim-pidedahana?
Taorian'ny fihibohana iray volana...
Mbola ilaina tokoa ve ilay fihibohana?
Zarao ho an'izay rehetra mihiboka ny vola tohan'ny fihibohana
Sao dia ilaina ny hampandoavana volabe ireo mararin'ny Covid-19?